Xirsi Cali Xaji Xasan, Faashil Aan Gaadhi Karayn Ayuunbaa bannaanka Ka Caaya. | Somaliland.Org
Xirsi Cali Xaji Xasan, Faashil Aan Gaadhi Karayn Ayuunbaa bannaanka Ka Caaya.
Baryahan dambe waxaa inagu batay aflagaaddooyinkii, eryo aynnaan caado u lahaan jirin iyo olale lagu hayo wasiir Xirsi Cali Xaji Xasan. Waxaa kale oo aan mararka qaarkood aad ula yaaba ciyaal yar yar oo madaxweynaha ama shakhsi kale oo mas`uul oday ah oo aabahood ama awowgoodba la ‘eg ku af dilaacsanaya. Waar wax kaleba ha joogaane dadkan dhaqaanka khariban wataai xagay inooga yimaaddeen?
Marka qof si gar darro iyo af-xumo ku jirto uu ka been abuurayo masu’uul siyaasi ah, waxaa isna dhanka kale ka soo jawaabaya qof isna xaqa arkaya ama diiddanba aflagaadooyinka qaawan ee baryahan dambe mareegaha qaarkood caado ka dhigteen qoriinkeeda, ama jecel si dad wax kala garanaya inay wax u dhaliilaan.
Waxaa xaqiiq ah in muwaadin kastaa xaq u leeyahay inuu si caafimaad qabta u dhaliilo dawlad kasta oo talada dalka qabata, waxaa se nasiib darro ah in dhaliisho noqoto mid ka baxsan luqaddii iyo basarkii wax la isugu sheegi jiray oo baryahan dambe noqotay cay qaawan. Waxaa wax laga xumaado noqotay in dhaliilo aflagaadaysan oo aan jirin laguna dhaawacayo karaamada qof mas`uul ah in lagu soo daabaco mareegaha internetka ee reer Somaliland qaarkood. Waxaa kale oo caado noqotay hiin raac hadba guuxa socda iska daba raaca oo aan ra`yiba lahayn ahna Xirsi diid oo xaal ka noqday adna is muuji oo ku muji sawirkaaga internetka. Waxaa ceeba ah oo dhaqan iyo siyaasadba ka reebban in dhaliil aan sal iyo raad toona lahayn lagu soo qoro shaashadaha mareegta internet-ka ama war baahiinta kaleba ee dad waynaha wararka looga fidiyo. Waxaa anshax xumo iyo dhaqan xumo ah in maqaalada iyo wararka laga duwo oo laga qulbaa gadiyo sidii ay u dhaceen si aan ahayn oo lagu weero masu’uul qaran ama loogu yeedho naanayso rakhiis ah oo aan dhaliil ahayn balse shakhsi cay weerer ah lagu soo dhajiyo shaashadaha mareegta internet-ka. Waxaad ogaata qof waliba wuxuu aqalkooda kala yimaaddo ayuu la shir yimaaddaa ka edaabta iyo hadalka ladifan leh aqalkooduu kala yimid kan afxumda ku hadlayaana isnaa aqal dhaqan xumadan iyo xasiidiini ka buuxdo ayuu ku soo barbaaray.
Baryahan dambe waxaa hadaba magaciisa la dhigi waayay Xirsi oo dad badan ay ka soo hadhay Xirsi, Xirsi… Horta Xirsi Cali Xaji Xasan ninna wax u leeyahay kama qaadan ee waa se shakhsi mas`uul qaran ah oo xilkiisa guta shaqadiisana ka soo baxa. Xirsi inta daba qaadatay waa la isla la yaqaanna inay yihiin xaaraan ku naaxyadii afmiinshaarnimada jaamicadaha uga soo baxay, waa dhadhamo raacyadii sida telephonka loo buuxsan jiray oo maanta taangigoodii qalalay. Xirsi shaqdiisu waa wasiirka xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland. Shaqadiisuna waxay xidhiidh la leedahay dadka subax kasta ugu soo kalaha xafiiska madaxtooyada ee doonaya inay u soo galaan xafiiska madaxweynaha hawlo shakhsi iyo hawlo muhiim ahba. Waxay shaqadiisu la xidhiidhaa hab maamulka maalin laha ah ee uu u shaqeeyo xafiiska madaxtooyadu oo uu wax badan ka badalay una ekaysiiyay madaxtooyo qaran. Xirsi wuxuu madaxtooyada ka badalay dhaqankii ahaa shaxaadka iyo dan laawanimada la iskaga soo kalihi jiray madaxtooyada, .
Xirsi Cali Xaji Xasan qofka aflagaadaynayaa waa qarad leh waayay foosto naafto ah, ama habaar qabe dhul aanu lahayn dhacay oo hore u caadaystay inuu madaxtooyada ka soo afmiinshaareeyo iyo qof wax aan macno lahayn ugu soo kalihi jiray madaxtooyada. Dadka hadaba danaha sidaas ah ugu soo kalaha madaxtooyada oo haddii ay dhul tahay ay ahayd in ay la xidhiidhaan dawladda hoose haday wax kale tahayna ay ahayd in la xidhiidhaan wasaaraddii ku shaqo lahayd ayaan ku farxin jawaabaha ay ka helaan wasiir Xirsi oo shaqadiisii noqotay wasiirka madaxtooyada oo ay khusayso hawlaha xafiiska madaweynaha. Kuuwaasaa noqday kuwa Xirsi la daba galay hadalada rakhiiska ah ee aan af muslin iyo af gaaleed toona aan lagu odhan karin. Fariintaydu waxay tahay anigu Xirsi mana aqaan magaalada Hargeysana waxaan hadda ku jooga fasax yar oo gaaban ayaan hadana indhahayga ku soo arkay shaqada fiican iyo sida wanaagsan ee wasiir Xirsi xilkiisa u guto. Waxa kale oo aan ogaaday maanta dibna aan la iigu qaldi doonin dhaqan xumada laga baahiyo mareegaha war baahinta internetka ma aha dhamaantood ee waa qaar gaar ah oo reer Somaliland ah dadkana ku majaro habaabiya kana baxay asluubtii iyo hab dhaqankii saxaafadda. Haddaan soo gabagabeeyo, Waar Xirsi waa halyay shaqadiisa ka soo baxay kuna adag mabadi `iisa shaqo maalmeedka ah oo faashil nolasha ka dhacay uun ku hadaaqayo cayda Xirsi .
Dayib Xaji Siciciid ( Dayib Qorane)
Previous PostMaayarka Baki Oo ka hadlay Dayactir ay ku samaynayaan Jidka u dhaxeeyaha Baki iyo BoorameNext PostAmnesty International oo ka Digtey Xidhiidh Milateri oo Dhexmara Ingiriiska iyo Soomaaliya	Blog